Zere Storelọ Ahịa Ngwa na "Tinye na Ihuenyo mbu" | Martech Zone
Amaara m na m nwere ike ijide ụfọdụ maka ihe a, mana abughi m onye ofufe Mac. Ọ dị mma, m doro anya na enweghị m ike iguzo ha. Enweghị m ike itinye mkpịsị aka m na ihe kpatara ya, mana nke a bụ mbido: iji zụlite ngwa maka iPhone dị ebube, ị ga-etolite naanị na Mac nwere ngwanrọ Mac-ntinye ego karịrị $ 2,000.
Ka o sina dị, iPhone bụ onye na-agbanwe ahịa na ahịa azụmaahịa nke azụmahịa ga-eburu.
Yabụ, ịchọrọ uru nke ngwa yiri ngwa, mana ịchọọghị ego ahụ (ma ọ bụ mbugharị a na-amanye gaa na ikpo okwu Mac), ma ọ bụ na ịchọghị ịmụ asụsụ koodu ọhụụ ọ bụla.
I meela nke ọma na mmemme ngwa weebụ, nwee uru niile nke igwe ojii na-eweta mba, yabụ gịnị kpatara ị ga-eji wulite ngwa ndị ahịa ugbu a? Karịsịa ma ọ bụrụ na ịnweghị mmasị na ngwa ngwa ngwa ngwa-ndị mmadụ ga-ahụ ngwa gị site na mbọ ị na-agba n'ịzụ ahịa, naanị ị chọrọ ịnye ha otu omume nnweta ngwa ngwa. Chọrọ ngwa aghụghọ.
Tinye na Ihuenyo mbu
Ozi oma. iPhones nwere ikike iji kwado ụdị ọrụ ahụ. Ọ dịghị Mac mkpa. Enweghị mmemme nke abụọ achọrọ maka ngwa ndị ahịa. Niile ị chọrọ bụ:
Mkpokọta wepụtara ma ọ bụ meghachi omume na 320px n'obosara.
a koodu snippet na ihe oyiyi
An apụl-aka akara ngosi (izu)
Nke mbu, kedu ihe koodu a na eme na isi?
Ejiri koodu dị na faịlụ zipụrụ dị n'elu kuzie onye ọrụ ahụ na usoro kwesịrị ekwesị ha kwesịrị iji, na-akụziri ha nke ọma iPhone ọrụ ndị dịịrịrịrị ha nke na-eme ka ibe weebụ gị dị ka ngwa ọ bụla ọzọ. Nke abuo, o nweela ihe arụpụtara nke mere na nke a na egosiputa na iPhones NA-enye onye ọrụ ohere imechi ozugbo, na agaghị ahụ ya ọzọ maka ọnwa 6, bụ ebe a ga-echetara ha ọzọ.
Ugbu a, maka akụkụ geeky: kedu ka m ga esi esi wụnye ya?
Zọpụta gị apple-aka-icon.png faịlụ na mgbọrọgwụ ndekọ nke ebe nrụọrụ weebụ gị ma zoo ya na nke kwesịrị ekwesị> njikọ> mkpado na isi.
Debe onyonyo ndị achọtara na zip file (nke dị n'elu) n'ime ndekọ pathed / onyonyo /
Gbanye koodu ahu na faịlụ ederede edere na file zip (nke di n'elu) tupu akara mmechi mmechi na peeji web (s) gị
Ọ bụ ya. Ọ bụrụ na ịgbaso usoro ndị a, ị ga-ahụ ozugbo gosipụtara na iPhone gị nke na-egosi onye ọrụ akara ngosi ụzọ mkpirisi na ihe nchọgharị Safari ha ma gwa ha ka ha Tinye na Ihuenyo mbu n'ihi na onye-enweta ohere dị ka ndị ọzọ niile ngwa.
Ugbu a, ngwa weebụ gị ga-ede akwụkwọ na akara ngosi na ihuenyo iPhone. N’ile anya na ịdị mfe nke nnweta, o nwere elele niile nke nwa afọ App n’enweghị ụgwọ ma ọ bụ nsogbu.
Tags: oru ntinyeihe omumuEpicorikike dabere na emailibé
Jul 22, 2011 na 5:05 PM
Akwa post. Nke a bụ ihe anyị mere http://maps.wbu.com - I gha achoputa otutu nkpuru ahihia n'ebe ahu nke na-ewepu ogwe adreesị adreesị na ịpịgharị okwu gbasara ibipụta ihe ndị a! Ekwenyere m na nke a bụ ngwọta ka mma karịa ịrụ ọrụ site na Storelọ Ahịa App. Na… ebe enwere ọtụtụ ngwaọrụ na ebe ahụ, ide ngwa ahụ na-adịkarị mfe na ntanetị ndị ọzọ.